Dariiqa loo maro: Qiimaynta saamaynta mashruuca raadiyaha 'White Dove' CVE ee waqooyiga Nigeria - Equal Access International
Dariiqa loo maro: Qiimaynta saamaynta mashruuca raadiyaha 'White Dove' CVE ee waqooyiga Nigeria
Suuragal ma tahay in barnaamijyada raadiyaha ay ka weeciyaan dhalinyarada inay ku lug yeeshaan xagjirnimada rabshadaha wata? Marka loo eego daraasaddan, barnaamijyada raadiyaha White Dove waxay caddeeyeen inay bixiyaan macluumaad laxiriira oo yareynaya ku lug lahaanshaha dhalinyarada ee kooxaha rabshadaha wata.
Mashruuc ah -
Nigeria, Dhisidda Nabadda & Isbedelka Xag-jirnimada, Wasaaradda Arimaha Dibadda Mareykanka
November 6, 2018 Sabina Behague
Himilada Mashruuca - In loo abuuro isbadal bulsheed oo togan malaayiin dad ah oo aan u adeegin woqooyiga Nigeria, adoo siinaya macluumaad aad iyo aad loogu baahan yahay iyo waxbarasho iyadoo la adeegsanayo qalab casriyeeysan oo ku haboon teknoolojiyad iyo kaqeybgal toos bulshada.
"Majiro dad aan eegno. Laakiin hadda barnaamijkaagii Ma Mafita [raadiyaha], waan haysannaa Waxaan rajeyneynaa oo bilaabaynaa inaan nafteena u aragno xalka,Ayuu yidhi nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Gobolka Borno oo mar xubin ka ahaa Boko Haram oo hada ku tabarucay ciidan is-difaaca oo bulshada ah.
Warbixintani waxay adeegsaneysaa istiraatiijiyad adag oo dhinacyo kala duwan leh iyo qiimeyn (M&E) si loo qiimeeyo aragtida dhagaystayaasha, faallooyinka, iyo dabeecadda isbeddelka natiijada saddexda barnaamij ee taxanaha raadiyaha White Dove. Cilmi baarista waxaa loogu talagalay inay diirada saarto aqbalida iyo saameynta fariimaha la gudbiyay. Natiijooyinka ka soo baxa cilmi baarista tayada leh, codbixinta codka ee 'Interactive Voice Response' (IVR), iyo codbixinta dhageysiga ee khadka tooska ah ayaa siisay cilmi baarayaashu aragti xoog leh oo ku saabsan saameynta barnaamijyada waxayna siisay hagitaan loogu talagalay horumarinta barnaamijyada raadiyaha cusub ee si wax ku ool ah ula macaamilaya dhagaystayaasha isla markaana si wanaagsan u beddelaya waxyaabaha qofku aaminsan yahay, dabeecadaha, iyo caadooyinka bulshada.
Warbixintani waxay soo bandhigaysaa xalal la soo jeediyey iyo dariiqooyin kale oo toos looga soo aruuriyey bulshada sidii loola tacaali lahaa xiisadda bulshada, xagjirnimada sii kordheysa, sinnaan la’aanta dhaqaalaha, qabatinka maandooriyaha, iyo mowduucyo kale oo lagu cadeeyay cilmi baarista qaab dhismeedka EAI ee horraantii 2017.
Waxay ka hadlaysaa saameynta ay barnaamijyada raadiyaha ku yeesheen nolosha boqolaal dhagaystayaal ah. Dhamaadka laba toddobaad ee cilmi baarista iyo boqolaal wareysiyaal ah oo laga sameeyay sagaal gobol iyo Abuja, hal shay ayaa caddaatay: Barnaamijyada White Dove waxay awood u siinayaan jiil cusub oo lagu daydo iyo farriinno la wargeliyay oo si firfircoon uga shaqeynaya hagaajinta nolosha qoysaskooda, asxaabta, iyo bulshooyinka ku nool woqooyiga Nigeria natiijada tooska ah ee macluumaadka iyo dhiirrigalinta ay ka helayaan bandhigyada.
Dulmarka Cad ee 'White Dove':
Ina Mafita (“The Way Forward”), oo ah bandhig dhalinyaro diirada saaraya CVE, oo ay soo saartay EAI
Ilimi Abi Nema ("Raadinta Cilmiga"), oo ah khudbad lagu soo bandhigayay dibuhabaynta dugsiga islaamka, waalidnimada, iyo nolosha carruurta Almajiri, oo ay soo saartay EAI.
Labarin Aisha ("Caasha Aasha"), oo ah riwaayad muujineysa sheekada iyo caqabadaha gabadha yar ee barakacay, oo ay soo saartay Tiyaatarka Jos Repertory.
Halkan ka akhri oo soo dejiso "Jidka Soo Socda" - Warbixinta iyo Qiimeynta EAI 2018 Warbixinta iyo Qiimeynta (PDF)